Ngoku kunokwenzeka ukugcina i-GIF kwi-DNA ye-fecal bacteria | Iindaba zeGajethi
Ngoku kunokwenzeka ukugcina i-GIF kwi-DNA ye-fecal bacteria
Kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo besinethuba lokuthetha nzulu ngobunye bobuchwephesha bale mihla obenziwe ngumntu, njenge CRISPR-case.9. Mhlawumbi igama alivakali ngathi liyinto kuwe, nangona, njengesishwankathelo esifutshane, ndikuxelele ukuba enkosi kuyo ngoku sinokwenza uhlobo 'umsiki wemfuza'Oko kungena ivula umnyango omkhulu kwihlabathi eligcwele amathuba.
Nangona kunjalo, kwaye nangona inkqubela phambili eyenzekayo ingaphezulu kokumangalisa, njengeqela leenzululwazi ezivela IYunivesithi yaseHarvard ndine gcina ifayile ye-GIF kwi-DNA ye-fecal bacteriaInyaniso kukuba asikazazi ngokuqinisekileyo zonke izibonelelo ezinokusinika obu buchule, kungasathembeki kwaphela, njengokuguquka okungalawulwayo, into amaqela aliqela abaphandi esele elumkisile ngayo.
1 Bakhetha into ethathwa njengefilimu yokuqala emhlabeni ukuba igcinwe kwi-DNA yebhaktiriya yelindle
2 Enkosi ngokusetyenziswa kweCRISPR-Cas9, abantu ngoku banokugcina idatha kumatyathanga eDNA aphilayo
3 Kuyimfuneko kuphela ukulandelelanisa i-genome yetyathanga le-DNA ukubuyisa ulwazi esele silugcine ngaphambili.
Bakhetha into ethathwa njengefilimu yokuqala emhlabeni ukuba igcinwe kwi-DNA yebhaktiriya yelindle
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, ngaphandle kwento yokuba kuvavanyo lokuqala iqela liza kusebenza nezinye iintlobo zedatha, ukubonisa impumelelo yabo bagqibe kwelokuba bayisebenzise enye ye-GIF edume kakhulu emhlabeni, esinokuyibeka ngokugqibeleleyo njengefilimu yokuqala eyenziwe ngabantu.
Ndithetha nge-GIF apho ungabona khona ukuhamba kwehashe. Uhlobo lwemovie eyenziwe ngu Eadward Muybridge, ugunyazisiwe, emva kokuhlawula isixa esikhulu semali yelo xesha, ngu Lelan stanford, ukubonisa ukuba kumzuzu othile ngexesha lomdyarho wehashe, igcina yomine imilenze esemoyeni.
Oko kuhlala kusenzeka kubuchwephesha obuninzi obugqibela buguqula umhlaba, konke kuqala ngokubheja phakathi kwebhiliyoni Lelan stanford y UJames keene, ngelo xesha umongameli weSan Francisco Stock Exchange, apho uLelan Stanford wathi ngexesha lomdyarho, ihashe laligcina imilenze yalo emoyeni ngexesha elithile ngelixa uJames Keene ekholelwa okwahlukileyo.
Ngale nto engqondweni kunye nenkxaso mali enkulu emva kwayo, uEadward Muybridge wakha isixhobo esabhaptizwa ngegama lika zoopraxinoscope into eluncedo yayiyeyokuba Thatha imifanekiso emininzi emgceni ukuze kubanjwe iintshukumo zehashe. Ngenxa yoko, sinoluhlobo lwefilimu esele isetyenziselwe ukwenza i-GIF yokuqala egcinwe kwi-DNA evela kwi-fecal bacteria.
Enkosi ngokusetyenziswa kweCRISPR-Cas9, abantu ngoku banokugcina idatha kumatyathanga eDNA aphilayo
Ukubuyela emsebenzini ovunwe liqela labaphandi abavela kwiYunivesithi yaseHarvard, sifumanise ukuba bakwazile ukuyigcina le GIF, njengoko ipapashiwe yiphephancwadi. indalo, kwi-DNA yebhaktiriya yelindle oko kubonisa into ekwakuthethwe ngayo ixesha elide, ukuba I-DNA sisixhobo esihle kakhulu apho ungagcina naluphi na uhlobo lolwazi.
Nangona kukho izazinzulu ezininzi ezazithetha nge amathuba okugcina anomdla Yintoni enokunikezelwa likhonkco le-DNA, inyani kukuba kude kube yile teknoloji ye-CRISPR-Cas9, bekubonakala ngathi kusafuneka silinde amashumi eminyaka ukuze sikwazi ukugcina idatha kwikhonkco le-DNA. Ngaphandle kwamathandabuzo, umzekelo omtsha wendlela itekhnoloji enokuthi iguqule ngayo umhlaba, ngakumbi ngexesha apho abantu baqala ukuba neengxaki zokugcina isixa esikhulu sedatha esikwaziyo ukuyenza.
Kuyimfuneko kuphela ukulandelelanisa i-genome yetyathanga le-DNA ukubuyisa ulwazi esele silugcine ngaphambili.
Esinye seziganeko eziphambili eziye zafezwa leli qela lophando ngamandla sebenza ngeDNA kwiiseli eziphilayo, endaweni yangoku ukuza kuthi ga ngoku ukuba into enjalo ifezekisiwe kodwa nge-DNA evela kwiiseli ezifileyo. Njengoko sele ipapashiwe kwi indaloI-Nukototides kuyabonakala ukuba isetyenziselwe ukuvelisa ikhowudi enxulumene neepekseli ezizodwa zomfanekiso ngamnye owawenzelwe ukugcinwa.
Ukuze ukwazi ukugcina ezi datha, iqela lezenzululwazi kuye kwafuneka limisele ukuba zeziphi iindlela ezilunge kakhulu zokugcina le datha ngaphakathi kwe-genome, yona kwelinye icala, emele ukuphucula okutsha kokusetyenziswa kwesi sixhobo. Xa bafuna ukubuyisa ulwazi olugcinwe kwi-DNA yebhaktiriya yelindle ababenayo kuphela Ukulandelelanisa i-genome, Itekhnoloji evumela ukuba i-DNA ifundwe. Njengeenkcukacha zokugqibela, kufanele kuqatshelwe ukuba ngexesha lovavanyo a Ukuchaneka kwe-90% yendlela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ngoku kunokwenzeka ukugcina i-GIF kwi-DNA ye-fecal bacteria
IHuawei Band 2 ibuyisa umongo weentsimbi zomzimba